August 13, 2014 • By National League for Democracy • Tags: Myanmar Peace Center, National League for Democracy, Peace, Political Parties, U Aung Min • Read more ➤
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလူငယ်များ ကွန်ဂရက်(SYCB) သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလူငယ်များ ကွန်ဂရက်(SYCB) မှ ၂၈-၂၉ မေလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကမကထပြု စီစဉ်ဆောင်ရွက်သော ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူငယ် များ တွေ့ဆုံနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ မဟာစီမံကိန်းများ၊ ပညာရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိ အခြေ အနေနှင့်၊ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြင် သဘောထားများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ဆွေးနွေး ဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အနာဂတ်တွင် မိမိအဖွဲ့အစည်းများ၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူညီပါသည် […]
May 30, 2014 • By Students and Youth Congress of Burma • Tags: 2008 Constitution, Education, Peace, Students and Youth Congress of Burma • Read more ➤
Important steps have been made in national reconciliation during the past two years. But promises and ceremonies will never be enough. The long-standing aspirations of Burma’s peoples for peace and justice must find solutions during the present time of national transition […]
October 11, 2013 • By Transnational Institute and Burma Centrum Nederland • Tags: Burma Centrum Nederland, Humanitarian Assistance, Justice, Land Confiscation, National Reconciliation, Peace, Transnational Institute • Read more ➤
In order to establish long-term peace-building in Republic of Union of Myanmar, monks, public, ethnic nationalities and civil societies who long for peace collaborated and participated peace-making activities in various approaches across the country on September 21, 2013 as International Day of Peace […]
September 21, 2013 • By 68 civil society organizations from Burma • Tags: International Day of Peace, Peace, Peace Process • Read more ➤